HXTUSD labanlaab - hagaha kor u qaadista iyo dhaqaajinta isku -darka biraha - Shiinaha HXTUSD Double - Bixiyaha hagaha kor u qaadista iyo dhaqaaqa,Warshad –HX
HXTUSD labanlaab - hagaha kor u qaadista iyo dhaqaajinta isku -darka biraha
Hore : HXTUL 205L Mashiinka Qaadista Pneumatic - dabool leh
Xiga : Nooca Wareejinta Awoodda Awoodda Mashiinka Neefsashada Neefta Leh
· Lagu dabaqi karo 250l rinjiga foostada furan, khad, waxyaabaha la isku qurxiyo iyo dareerayaasha kale ee kiimikada.
· Bir adag kanaal adag oo leh giraangiro adag oo si ammaan ah oo fudud loo maareeyo.
· Usha qaadista usha hagaha laba -sidka ah ee gaarka ah waa mid deggan oo leh adeeg dheer.
· alaabtiisu waa la ballaadhiyey oo la dhumucay guud ahaan, waana mid ka sii adag marka la isticmaalayo.
Xawaaraha aan culeyska lahayn (RPM)
250L foostada L (mm)